अक्सिजनको पाइपबाट खुट्टा हटा - फेसबुक फण्डा - साप्ताहिक
शेरेको गाडीले एक दिन एउटा चाइनिजलाई ठक्कर दिएछ । तत्कालै पुलिस आएछ र उसलाई हस्पिटल लगेछ, पछि शेरे घाइतेलाई भेट्न भनेर हस्पिटल पुगेछ । शेरे पस्नेबित्तिकै चाइनिजले भनेछ : च्याङ चोङ सिमि च्याँ ।
यति भनेर चाइनिज मरेछ । शेरेले कुरा बुझेनछ र उसको कुनै अन्तिम इच्छा पो थियो कि भनेर पत्ता लगाउन चीन गएछ । शेरेले चाइनिजले भनेको कुराको मतलब बुझेको त कुरा यस्तो पो रहेछ : साले हरामी, अक्सिजनको पाइपबाट खुट्टा हटा ।
कसले भोज ख्वायो, देख्न पाइन्छ फेसबुकमा
कसले कसलाई रुवायो, देख्न पाइन्छ फेसबुकमा
कोही हाँस्छन् रमाएर, कोही रुन्छन् धोका पाई
कसले कति आँसु चुहायो, देख्न पाइन्छ फेसबुकमा
कोही भन्छन् भोक लाग्यो, कसैका खाना फालाफाल
कसले मासु कुहायो, देख्न पाइन्छ फेसबुकमा
थाहा हुन्छ फिलिम हेरेको, डुल्ने, घुम्ने उत्तिकै
कसले कहिले नुहायो, देख्न पाइन्छ फेसबुकमा
नयाँ लुगाफाटा किने फोटो आउँछ तत्कालै
कसलाई कति सुहायो देख्न पाइन्छ फेसबुकमा ।
पुलिस आफ्नो छोरासँग : छोरा तेरो रिजल्ट राम्रो छैन, आजदेखि खेल्न, कुद्न, टिभी हेर्न सबै बन्द ।
छोरा : लु १ सय रुपैयाँ लिनुहोस, अनि यो कुरालाई यहीं दबाउनुहोस् ।
एउटी केटी एउटा काम ६ दिनमा सक्छे भने तीन जना केटी मिलेर त्यही काम कति दिनमा सक्लान ?
गेस गर्नुहोस त ।
उत्तर : त्यो काम कहिल्यै सकिँदैन, किनभने तीन जना केटी एकठाउँमा भेला भएपछि गफ गर्न र कुरा काट्नबाहेक अरू के नै काम गरेर बस्लान् र ?
परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा नर्सरीको बच्चाले सु गरेछ । अनि मिसले : छि: छि: फोहोरी, यो के गरेको तिमीले ?
बच्चा : अनि तपाईंले नै भन्नुभा’को हैन, पहिले जे आउँछ त्यही गर्नु भनेर ।
शेरे एक दिन जंगल घुम्दै थियो, अचानक एउटा चितुवा आएछ ।
शेरे : अत्तालिएर भागेछ, भाग्दाभाग्दै शेरे एउटा रूखमा ठोक्किएछ । उसको घुँडामा नराम्रोसँग चोट लागेछ । बल्ल–बल्ल शेरे क्लिनिक पुगेछ ।
डाक्टरले घाउ हेरेपछि मल्हम दिएछन् ।
शेरे : डाक्टरसा’ब, यो दबाई कति कति बेला खाने हो ?
डाक्टर : खाने होइन, ठोक्किएको ठाउँमा लगाउने ।
शेरे ७ दिनपछि फेरि क्लिनिक पुगेछ, खुट्टा अझ धेरै सुन्निएको देखेर
डाक्टर : हैन, तिमीले दबाइ लगाएनौं ?
शेरे : लगाको हो तर खै सन्चो भएन ।
डाक्टर : ठोक्किएकै ठाउँमा लगायौ ?
शेरे : हो भनेको क्या ! नपत्याए हिँड्नु न हेर्न, म जुन रूखमा ठोक्किएँ त्यही रूखमा लगाएको हो ।
फेडेरर घाइते हुनुको कारण